I-GPS008W - I-OMG GPS Tracker Watch Yezingane - Izixazululo ze-OMG
I-GPS008W - I-OMG GPS Tracker Buka Yezingane
I-OMG 2.0MP Ikhamera yengane ye-GPS Tracker Bukela i-LBS + GPS + AGPS + WIFI Ukubeka i-Smart Kids Watch
* Isethaphu yamahhala nokuqeqesha
* Whatsapp +65 8333 4466 yoku-oda !!
* Ukulethwa Kosuku Olufanayo (Oda namuhla bese uthola into yakho namuhla) - S $ 12
I-GPS tracker watch yezingane yenzelwe ukunika abazali noma abanakekeli ukuthula kwengqondo mayelana nokuthi ikuphi ingane. Akulula ngaso sonke isikhathi ukugcina womabili amehlo enganeni esebenzayo, futhi ukulandelela i-GPS kuyindlela elandelayo yokuzigcina futhi uqinisekise ukuphepha kwazo.
Ngokungeziwe endaweni yokulandelela, i-OMGGPS08W GPS Tracker Watch yezingane inikezela ngezinto eziningi, kufaka phakathi ukushaya ngandlela-thile nezindlela ezimbili kanye nekhono lokusetha izindawo ezinamandla ezikwazisa lapho ingane yakho ishiye indawo ekhethiwe. Sibheka ukuthi imaphi amadivayisi adlulela ngale kwezisekelo nokuthi lezo zici zenziwa kanjani.
I-GPS, i-GPRS, i-LBS, i-WIFI, i-Gravity sensor positioning.
Ukusekela ucingo oluphuthumayo no.
Izinombolo zokuqapha zokusekela.
Abangane izinombolo izingane zingenza ucingo ngokusebenzisa.
Iwashi le-alamu lingasethwa yi-APP futhi i-alamu izothunyelwa ukubuka ngesikhathi esinqunyiwe.
Ibanga eliphephile, lapho izingane zingaphaya kwebanga eliphephile elisethwe ngaphambilini, i-APP yeselula izothola i-alamu.
Ukulandelela isikhathi sangempela, ithrekhi ngesikhathi, ukudlala komlando.
I-alamu ye-geo yocingo.
Ukuxhumana okubili indlela.
Ukusekela i-Google Map.
Ayikho imali ekhokhwa nyangazonke (isekela kokubili okukhokhelwe kusengaphambilini nokukhokhelwe ngemuva).
I-3G Kids GPS Tracker Watch - Ucingo lwe-2-Way + SOS
I-3G Kids GPS Tracker Watch - Usizo oluphuthumayo lwe-SOS
I-3G Kids GPS Tracker Watch - Umzila Womlando
I-3G Kids GPS Tracker Watch - Ikhamera
Uhlobo lomkhiqizo: Izingane zeKhamera ye-2.0MP ye-3G GPS Tracker Buka LBS + GPS + AGPS + WIFI Ukubeka i-Smart Kids Watch
Imodi yendawo: I-GPS + AGPS + LBS + WIFI
Ipaneli ye-LCD yokubonisa: Isikrini se-1.54inch, i-240 * 240, isikrini se-2.5 d sopphire
Izinhlelo Zamaselula: I-Android ne-IOS
Inethiwekhi: GSM / GPRS / GPS / WCDMA, Ukusekela i-WiFi
I-Chip Main: I-MTK6572A yombili oyisisekelo 1.2GHZ, 256MB + 512MB
ibhethri: 600mAh; ibhethri elayishwayo
Ukuvama: I-GSM 850 / 900 / 1800 / 1900Mhz, i-WCDMA 2100 / 900
Ukuqapha kwe-GPS:5-15M (2D RM)
Isikhathi sokushaja: 2-3 amahora
Isikhathi sokulinda: 72H
Izinto zokubamba: Amakhemikhali okudla-ebangeni
Gqamisa: 3G ukushayela
Ukubuka okuphelele kwe-3063 Ukubuka kwe-16 Namuhla